Puntland Voice – Page 5 – Codka Dalka iyo Dadka
wiil uu dhalay Amiirka Imaaradda Al-Fujayra ee dalka Imaaraadka Carabtu goostay oo uu magan gelyo siyaasadeed waydiistay Qatar.
Wargeyska Daily Telegraph ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa qoray in codsigiisana sii mariyey safaaradda Qatar ku leedahay London. Xogo laga helayo dad u dhawdhaw Amiirka goostay oo magaciisa la yidhaa Sheekh Raashid Bin Xamad Al-Sharqi, iyo sida oo kale […]
Golaha Amniga Qaranka ayaa kulankoodii joogtada ahaa ku yeeshay magaalada Baydhabo, 3-5 Juun 2018. Shirkaas oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada, Koonfur Galbeed ee Baydhabo waxaa looga hadlay arrimaha Amniga Qaranka, waxaana shir-guddoomiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. […]
Madaxweynaha Puntland C/weli Gaas oo Maanta dib ugu so laabtay Garowe
ayaa bogaadiyay Howlgaladii Ciidamada Puntland ka sameeyen Buuraha Gal-gala.kuwaaso dhawaan ay sheegen inay ku dileen ku dhawaad 50 ka tirsan Al-shabaab. “Madaxweynuhu wuxuu hambalyo iyo bogaadin u diray ciidanka difaaca Puntland oo dhar-baaxo kulul ku dhuftay kooxda argagixisada ah ee […]
Shirka Amniga Qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay
, waxaana daah furay Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen Ra’isal wasaraha Jamhuuriyadda, madaxda maamullada iyo xuno katirsan golayaasha dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Shirkaan ayaa diiradda lagu saarayaa guud ahaan amaanka soomaaliya iyo in si wada […]
Dawladda Puntland ayaa sheegtay in Dawladda Somaliya ay dhinac ka noqotay Colaada udhaxeeysa Puntland iyo Somaliland
Dawladda Puntland oo Eeedayn u jeedisay XFS ee ka taagan Deegaanka Tuko-Raq. Guddiga difaaca Puntland oo Saxafadda kula hadlay Magaalada Garoowe ayaa tilmaamay in lacagtii halka Million ahayd ee Dawladda Somaliya ugu deeqday Somaliland an lamarin meelihii ku haboonaa. Guddiga […]
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa soo xiray tartanka Qur’aanka Kariimka ah ee heer Puntland
kaasoo muddo saddex cisho ah ka socday magaalada Garoowe. Tartanka soddonka JUZ waxaa ku guulaystay Zakariye Axmed oo ka socday degmada Carmo ee gobolka Bari. Wuxuu abaal-marin u helay Gaari NOHA ah.
Guddiga Difaaca Puntland oo Saxaafadda isugu Yeeray
ayaa goor dhow shir jaraa’id qabana, waxaana saxaafada looga yeeray Madaxtooyada magaalada Garoowe. Guddiga Difaaca Puntland ayaa la sheegay iney ka hadli doonaan howlgaladii buuraha Galgala iyo dhaq dhaqaaqa ka socda gobalka Sool.
Ciidamada Maamulka Soomaaliland ayaa goordhaweyd xabsiga magaalada Laascaano ku xiray Weriye Mukhtaar Cabdi Jaamac
oo kamid ah Weriyayaasha magaaladaa , xubinna ka ah Golaha Fulinta ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP . Xariga Wariyaha waxaa Warbaahinta u xaqiijiyey qaar kamid ah Weriyayaasha ka howlgala Warbaahinta magaalada Laascaano ee Gobalka Sool. xariga ayaa imaanaya kadib markii […]
Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa aqbalay in uu xilka wareejiyo
sidda Maanta ay shaaciyeen Ururka Qareenadda Soomaaliyeed. Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa horay uga soo horjeestay xilka qaadistii uu ku sameeyay Madaxweynaha Soomaaliya, isagoo ku tilmaamay sharci darro. Iidle ayaa xilka uga dambeeyay Ilka-xanaf, kaasoo isna diiday xilka qaadis uu ku […]
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray magaalada Baydhaba
halkaas oo maalinta berri ah uu si rasmi ah uga furmayo Shirka Golaha Amniga Qaranka. Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed oo ka warbixiyay safarka Madaxweynaha ayaa yiri “Shirkii u dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho bishii Febraayo waxaa lagu […]
« Previous 1 … 3 4 5 6 7 … 1,044 Next »